Services for Schools | Ny Fanorenana Valisoa - Ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
Home Sampana Sekoly
Amin'ny maha-fiantrana fanabeazana aizana sy fifandraisan'ny mpianakavy dia manolotra serivisy tsara ho an'ny sekoly izahay. Mampiasa ny porofo farany momba ny vokatry ny pôrnôgrafia amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe izahay mba handraisana lesona mifandraika amin'ny mpianatra avy amin'ny taona 11 ka hatramin'ny 18 taona ao anatin'ny fandaharam-pianarana PSHE / SRE. Manome fitaovana mifanaraka amin'ny taona ho an'ny mpianatra izahay mba hanampiana azy ireo hitety ny tontolon'ny Internet ankehitriny. Amin'ny fahafantarana ny fiatraikany amin'ny fahasalamana, ara-dalàna ary ny fifandraisana amin'ny filokana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, dia afaka misoroka ny fandriky izany izy ireo na mitady fanampiana raha manao izany. Izahay koa manome hery ny ray aman-dreny hiresaka an-trano amin'ny zanany momba an'io lohahevitra sarotra io. Ny dinidinika ataontsika manokana izay voarakitra miaraka amin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana sy ny lalàna ary ireo mpampiasa manarina dia mahatonga ny lesona ho marina kokoa. Manoratra fitaovana sy fanohanana ho an'ny ray aman-dreny sy mpampianatra izahay. Ireo fitaovana koa dia mety amin'ny sekoly miorina amin'ny finoana.
"Nanao lahateny mahafinaritra tamin'ny zanakay i Mary tamin'ny lohahevitra momba ny pôrnôgrafia: nandanjalanja, tsy nitsaratsara ary nampahalalàm-baovao izy, nanampy tamin'ny fampiofanana ireo mpianatra ho an'ny fahalalàna ilainy mba hahafahana manao safidy tsara eo amin'ny fiainany."
Stefan J. Hargreaves, Mpitantana ny Seminera, Tonbridge School, Tonbridge
"Mino aho fa mila ny toeram-piarovana azo antoka izay ahafahan'ireo mpianatra mandray anjara malalaka amin'ny olana maro mifandraika amin'ny firaisana, ny fifandraisana ary ny fahazoana ny pôrnôgrafia an-tserasera amin'ny vanim-potoana nomerika."
Liz Langley, Lohan'ny Sampan-draharahan'ny Sosialy sy Sosialy, Dollar Academy
Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny fahasalamana, ny fitondran-tena ary ny fahatsaran'ny zaza ankehitriny. Mety ho fantatrao koa fa ny lalàna momba ny fanamarinana taona ao amin'ny lalàna ara-toekarena nomerika 2017 dia antenaina ho manomboka amin'ny alàlan'ny faran'ny 2019. Tsy mbola nanambara daty marina ny governemanta. Ny fiatraikany dia hahatonga azy ho sarotra kokoa amin'ny zaza ny miditra amin'ity fitaovana ity. Manahy ny manam-pahaizana fa ho an'ny ankizy sasany izay efa lasa mpampiasa mavesatra dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Raha mieritreritra ianao fa misy risika izany ao amin'ny sekolinao, dia mety hanampy anao izahay.
Firaisana ara-nofo isika ary fifandraisana ara-panabeazana amin'ny fampiasana ny fikarohana momba ny neuroscience farany sy ny fikarohana siantifika sosialy miaraka amin'ny fitsipi-pihetseham-po fototra. Ny atrikasa atolotr'ireo matianina dia neken'ny Royal College of General Practitioners. Manolotra sombin-tany mandritra ny herintaona isika noho ny mety ho fampiasana sary vetaveta ho an'ny mpianatra hatramin'ny taonan'ny 12 ka hatramin'ny 18 taona ho an'ny sekoly PSHE na ny Citizenship. Ny fomba fijerintsika dia ny manome porofo ho an'ny mpianatra mba hanampiana azy ireo hampiasa fahaiza-misaina matihanina ary hampivelatra ny fitsarany. Manome hery ireo ray aman-dreny koa isika mba hahafahan'izy ireo mahomby amin'ny zanany ao an-tokantrano ary mampiditra loharanom-baovao mahasoa. Matetika izahay no nasain'ny BBC TV sy Radio ary ny gazety nasionaly haneho hevitra momba io lohahevitra io.
Ny Fanomezam-pahasoavana dia manome lesona sy lahateny samihafa. Tsy misy sary vetaveta naseho. Ny fifanakalozan-kevitra dia mifanaraka amin'ny fitambaran'ny sokajin-taona. Jereo ny antsipiriany etsy ambany. Ny fampidirana lesona ho an'ny mpampiasa hampiasaina dia hambara mandritra ny herinandro ho avy.
Ny mpanolotra ny serivisinay ho an'ny sekoly dia Rtoa Mary Sharpe, Advocate, Dr. Darryl Mead ary Ramatoa Suzi Brown. Ramatoa Sharpe dia manana fiaviana ara-psikolojika ary nampihatra ny lalàna tamin'ny naha mpikambana azy tao amin'ny Faculty of Advocates tany Scotland sy Brussels. Nandany valo taona tamina mpampianatra nahavita fianarana tao amin'ny Oniversiten'i Cambridge izy izay nihazona atrikasa miorina amin'ny porofo amin'ny fanohanana ny tampon'isa. Dr. Mead dia manam-pahaizana momba ny teknolojia fampahalalana ary nampiofana ho iray amin'ireo Tompondakan'ny Digital any Skotika. Hatramin'ny 2015 dia izy no lefitra lefitry ny National Library of Scotland. Mpampianatra efa voaofana koa izy. Suzi Brown dia mpampianatra manana traikefa 7 taona amin'ny fampianarana PSHE amin'ny sekoly anglisy ary mpanampy mpanampy ao amin'ny Bishop's Stortford College, Hertfordshire nandritra ny 5 taona. Mpikambana ao amin'ny tetikadin'ny governemanta Scottish izahay amin'ny fiarovana ireo vondrona marefo ary nahavita fiofanana momba ny fiarovana ny zaza.
Raha tianao ny handinika ny tolotr'asa ho an'ny sekolinao, azafady mifandraisa amin'i Mary Sharpe, ao amin'ny mary@rewardfoundation.org na amin'ny telefaona amin'ny 07717 437 727
Miara-miasa amin'ny vondron'olona samy lahy na vavy isika. Ny fitaovana dia fahasamihafana. Ny lahateny rehetra sy ny lesona rehetra dia mety 40-60 minitra mialoha mba hialana amin'ny fandaharam-potoana hialana amin'ny fanontaniana.
Fampidirana ankapobeny ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet:
ny atidoha adolescent
loza ho an'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina; fanatanterahana fanabeazana, heloka bevava, fifandraisana
fanadihadiana amin'ny lahatsary amin'ny tanora mpidoroka pôrnika izay nahasitrana
Ny fomba hananganana ny faharetana sy ny toerana hahazoana fanampiana
Firaisana sy ny Media:
Fantaro ny antony mahatonga ny dokam-barotra, ny sarimihetsika ary ny sary vetaveta
Fantaro ny voka-dratsin'ny fiankinan-doha amin'ny sary vetaveta
mahatakatra ny zavatra rehetra nomena lanjany - ny hasarobidin'ny olona dia mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra
Fantaro ny firaisana ara-nofo satria ny zava-dehibe
Sex and Identity:
Fantaro ny dikan'ny hoe firaisana ara-nofo (tafiditra ao koa ny fampahalalam-baovao momba ny firaisana ara-nofo)
Fantaro sy takatr'ireo mari-pamantarana ara-panaovana samihafa ampiasaina
Fantaro fa ny olona tsirairay dia miavaka sy manokana
Fantaro fa tsy mamaritra antsika ny firaisana ara-nofo sy ny mari-pamantarana ara-nofo na fitondran-tena
Firaisana ara-nofo sy fanekena - fahalalahana misafidy:
Fantaro ny lalàna momba ny firaisana ara-nofo
clarify ny fomba fiasa miasa amin'ny fifandraisana
Fantaro fa ny olona tsirairay dia manana safidy sy feo ary fomba fampiasana izany
Fantaro fa manana ny lanjany ny olona tsirairay
Fantaro fa ny fifandraisana tsara dia mampirisika ny fifandraisana malalaka sy ny fanajany ny fifanajana
ahoana ny fiovan'ny indostrian'ny pôrnôgrafia sy ny fiantraikany amin'ity taranaka ity
fomba hiresahana amin'ny zanakao
ny vokatry ny fampiasana herisetra amin'ny pôrnôgrafia momba ny fahasalamana, ny fahombiazany, ny fifandraisana ary ny heloka bevava
paikady, miaraka amin'ny sekoly, hanampy ny ankizy hanatsara ny fahavoazana mifandraika amin'ny sary mamoafady amin'ny aterineto
vidin'ny: Ho an'ny lahateny £ 500 plus fandaniana amin'ny fandaniana.
Tolotra hafa ho an'ny sekoly
S2 sy S4: Sexting: olana ara-pahasalamana sy ara-dalàna
Inona no ianarantsika avy amin'ny atidoha?
Nahoana ny atidohan'aretina no mora mitebiteby noho ny fanimbana tsikelikely
Fitsipika ara-pitsarana momba ny adolantsento momba ny fandikan-dalàna
Lahatsary fanadihadiana amin'ny tanora mpidoroka pôrnika izay nahasitrana
Ahoana no hananganana ny faharetana sy ny toerana hahazoana fanampiana
S5 / 6: Pôrnôgrafia amin'ny fitsarana
Ny fiantraikany amin'ny fahombiazana sy ny vokatra
Fihetseham-po amin'ny fiankinan-doha amin'ny fihetsika sy ny tsy fahafahana manao firaisana ara-nofo
Manakiana ny fiantraikan'ny indostrian'ny pôrnôgrafia ho isan'ny 'toekarena misarika ny saina'
24-Ora Digital Detox ao amin'ny 2 sessions c.7 andro miavaka: Ny fampiharana dia mirakitra ny fampiasana aterineto rehetra
Ny tapany 1 dia misy ny fifanakalozan-kevitra voalohany momba ny fikarohana momba ny "endrika mandresy lahatra", ny amin'ny fahafaham-po eo noho eo ary ny fifehezan-tena; toro-hevitra amin'ny fanaovana detox
Fizarana 2, famelabelaran-kevitra momba ny zavatra niainany tamin'ny fanandramana ity detox 24 ora ity nandritra ny herinandro niditra
Jereo ny tantaran'ny vaovao momba ny fanakanana nomerika nomerika S4 ary S6 mpianatra any amin'ny sekolin'i Edinburgh.
Fanentanana momba ny voka-dratsin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet (P7 ihany):
Ny plastika ao an-tsaina: mahatakatra ny asan'ny orinasa taloha sy vaovao (maniry sy mieritreritra)
Fantaro hoe ahoana no ahafahan'ny atidoha mamaly ny tontolo iainana ary mianatra ny fahazarana
Fantaro ny mety hahasosotra ny eritreritro; inona no tokony hatao raha mahita horonan-tsary sy sary mampahatezitra ahy aho
Ny fizarana 1 dia ahitana ny fifanakalozan-kevitra voalohany momba ny fomba ahafahan'ny aterineto hampiato ny fifandraisana amin'ny hafa ary handratra antsika amin'ny torimaso; torohevitra momba ny fanesorana
Fizarana faha-2 fifanakalozan-kevitra momba ny zavatra niainany tamin'ny fanandramana ity detox 24 ora ity nandritra ny herinandro niditra
Fanohanana ireo ray aman-dreny
Miresaha amin'ny ray aman-dreny momba ny porofo farany momba ny loza sy ny paikady hiatrehana olana. Izany dia manampy amin'ny famakiana ilay ranomandry ho an'ny adihevitra ao an-trano
Strategies, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sekoly, hanampy ny ankizy hanatsara ny fahavoazana mifandraika amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet
Please fifandraisana anay ho an'ny teny nindramina maimaimpoana. Ny Reward Foundation dia afaka manome lesona namboarina manokana koa hamaly ny filanao.
Ny vidiny dia maimaim-poana VAT ary hampiditra ny dia rehetra ao anatin'ny fehin-ketra ao Scotland sy ny fitaovana.